Akụkọ - pesdị ụlọ ọrụ nhazi axis ise
Ntụkwasị obi ịdị mma
Alminum CNC machining
Plastic CNC machining
Steel CNC machining
Die Nkedo Parts
Akụkọ ihe mere eme
Akụkọ ụlọ ọrụ
Ntọhapụ oru ngo
Tydị ise axis machining center
Imirikiti ebe a na-arụ ọrụ axis ise na-agbaso usoro 3 + 2, ya bụ, XYZ usoro ahịrị atọ na-agbakwunye usoro abụọ nke ABC atọ a na-atụgharị na gburugburu XYZ. Site na akụkụ buru ibu, enwere kyzab, xyzac na xyzbc. Dika nchikota uzo nke uzo abuo abuo, enwere ike kewaa ya na uzo ato nke uzo uzo ise: uzo okpokoro abuo, ntughari ya na isi isi ya, na isi isi ya. 1: ise axis machining center na abụọ turntable Ọdịdị:
A-axis + c-axis okpukpu abụọ nwere ike ịgbanwe agbanwe, ihe na-arụ ọrụ nwere ike ịgbanye gburugburu axis axis, nke bụ axis. Etiti okpokoro nwere ike gbanwee ogo 360 gburugburu gburugburu axis, nke bụ ax ax. Na Nchikota AC anyụike abụọ, ma e wezụga na ala elu nke workpiece-apụghị esichara, ndị ọzọ na ise na-ebupụta nwere ike esichara. Ihe dị iche iche nke igwe a bụ na ọkpụkpụ na-arụ ọrụ dị mfe ma na-agbanwe agbanwe, ọnụahịa ya dịkwa ala, mana ikike nke ịrụ ọrụ na-ejedebe
Nke a na ụdị ise axis linking machining center mejupụtara nke xyzbc axis. Ntughari nke uzo ise nke uzo uzo ise di iche iche karie ya, ya na ebe a na - achoghi aka ya, ma ihe omuma a di otutu ma ugwo di elu.
3: ise axis linkage machining center na abụọ siwing isi Ọdịdị:
A na-edozi oke ntụgharị dị elu nke spindle site na iji ọkpọ akwara dị elu. Ọdịdị nke igwe niile bụ ọtụtụ ụdị ụzọ.
Post oge: Ọkt-12-2020
akwụkwọ akụkọ anyị kwa izu
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.
Ajụjụ Maka Pricelist
8lọ 816, Nke 12, Changping Avenue, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, China 523570
njikọ dị mkpa
Olee otu anyi kwesiri isi choputa ihe di elu ...
Gịnị bụ ọdịnihu nke NC machining specia ...
Njikwa machining ziri ezi nke CNC lath ...
Olee otú ka mma anyị mmepụta arụmọrụ ...
Otu esi ejikwa ụlọ ọrụ nhazi CNC nke ọma
Copyright - 2010-2020: All Rights echekwabara.
Gaelic nke Scots